Madaxweyne Trump oo u ololaynaya Dhaqan looga bartay Madaxda Soomaalida! | Hayaan News
Madaxweyne Trump oo u ololaynaya Dhaqan looga bartay Madaxda Soomaalida!
Washington (Hayaannnews):- Musharaxiin isku diyaarinaya kursiga madaxweynaha kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ka hor yimid go’aanka ay dowladda ku diidan tahay in dadka madowga ee u dhashay Mareykanka la siiyo magdhaw dhanka midab takoorka iyo adoomaysiga.
DONALD TRUMP MADAXWEYNAHA MARAYKANKA
Wuxuu ku tilmaamay waqti laga xaday xilligiisa madaxweynenimada. Jerry Falwell Jr. oo ah madaxa Jaamacadda Liberty ayaa boggiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku billaabay ol’ole lagu dalbanayo in Trump waqtigiisa loogu kordhiyo 2 sano oo dheeraad ah, ka hor inta aan doorasho la galin.
Mr Trump ayaa dib usii faafiyay qoraalkaas, waxaana loo fasirtay in ol’olaha muddo kordhisashada uu isaguna qeyb ka yahay. Arrintan ayaan ku cusbeyn dhagaha dadka Soomaalida ah, maadaama madax kala duwan oo soo martay Soomaaliya ay dalbadeen in waqtiga loo kordhiyo, ka dib marka uu dhamaado xilligii sharciga ahaa ee maamulkooda loo qabtay.
Dadka qaar ayaa hadalka madaxweyne Trump u arkay mid ka hor imaanaya gafna ku ah sharciga u yaalla dalka. Hase yeeshee, hadallada Madaxweyne Trump ayaa badanaa loo qaataa kuwa kaftan ah. Balse Jon D. Michaels, oo ah garyaqaan wax ka bara Jaamacadda California ee Los Angeles, ayaa sheegay inuu Trump hadalkiisa qaatay.